यसरी पत्ता लाग्छ महिलको गोप्य यौन ब्यवहार ! – SN-One of the top news portal in Nepal, Trusted news …
यसरी पत्ता लाग्छ महिलको गोप्य यौन ब्यवहार !
२०७६ जेष्ठ ३१, शुक्रबार २२:०५ मा प्रकासित
ओठलाई महिला सौन्दर्यको प्रतीक पनि मान्ने गरिन्छ । गुलाबी ओठ त महिलाहरुका लागि झनै आकर्षक मानिन्छ । जस कारण पनि अधिकांश महिलाहरु आफ्नो ओठ प्रति निकै सजक र सतर्क रहँदै आएका पाइन्छन् । तर ओठ खाली सौन्दर्यको खास पहिचान मात्र रहेन । ओठले महिलाको सौन्दर्यसँगै उनीहरुको यौन व्यवहार वा चालचलनका विषयमा समेत बुझाउँछ । शरीरका हरेक अंगहरु हाम्रा अन्य अंगहरु कुनै न कुैन हिसाबले अन्र्तसम्बन्धित नै रहेका हुन्छन् ।
जस्तो की नाभी (नाइटो) र मानव स्वास्थ्यका बीचमा गहिरो सम्बन्ध रहेजस्तै महिलाको ओठले उनीहरुको यौन व्यहारसँग सम्बन्ध राख्दछ । स्टकल्याण्डमा गरिएको अध्ययन अनुसार थेप्चो ओठ हुनेभन्दा माथिल्लो ओठ बिचमा केही अग्लो र थोरै चुच्चो (क्युपिड बो) भएका महिला यौनसम्पर्कका बेला छिटो चरमोत्कर्षमा पुग्ने तथ्य पत्ता लागेको छ ।
महिलाको ओठको प्रकार योनी, पाठेघर तथा अरु यौनांगको संवेदनशीलतासँग सम्बन्धित हुने अनुसन्धानकर्ताहरु बताउँछन् । त्यसैले अग्लो र पुष्ट ओठ हुने महिलामा चरमोत्कर्षमा पुग्ने गति थेप्चो आकारका ओठ हुनेमा भन्दा १२ गुणा बढि हुने ठहर उनीहरुले गरेका छन् । (एजेन्सीको सहयोगमा)
बालबालिकालाई गर्मीबाट जोगाउन अपनाउनुहोस् यी उपाय
असल पार्टनर चाहने पुरुषले महिलालाई सोध्न नहुने यी ६ प्रश्न
सारै गारो परेको छ भने यसरी एक्लै यौनसन्तुष्टि लिन सकिन्छ(हेर्नुहोस टिप्स)